Tao amin’ny tontolon’ny bilaogy Kiswahili · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Mey 2019 3:18 GMT
Iza moa ireo Waswahilis? Misy ve ireo Swahili hatramin'ny nahaterahana, araka ny jeografia na amin'ny alalan'ny fifehezana ny teny? Miezaka mamaly ity fanontaniana ity, milaza amintsika i Mwandani, fa misy Ivom-pampianarana Swahili vaovao ao Mombasa, Kenya. Ny Ivon-toeram-pikarohana momba ny Fianarana Swahili ao Afrika Atsinanana dia fiarahamiasa eo amin'ny Sekoly Fandalinana Tatsinanana sy Afrikana (SOAS amin'ny teny Anglisy) ary ny Mozea Nasionaly ao Kenya
Damija manambara ny vokatry ny fifidianana filoham-pirenena tao Zanzibar izay naha-voafidy indray ny kandidan'ny antokon'ny fitondrana, Amani Abeid Karume. Tahaka ny nitranga tamin'ny fifidianana tamin'ny taona 2000, nandà ny hanaiky ny governemanta vaovao ny antoko mpanohitra lehibe, Manda Sivika Mitambatra- Civic United Front (CUF), milaza izy ireo fa misy ny tsy fanarahan-dàlana tamin'ny fifidianana. Nampanantena hanatontosa fihetsiketseham-bahoaka amin'ny endrika Okraina ny kandidan'ny CUF, Seif Hamad.
Milaza i Miruko, raha nisaintsaina momba ny valim-pifidianana fa na dia resy tamin'ny fifaninanana aza, dia nampiseho fa hery politika lehibe ao Zanzibar ny CUF ary nampihena ny tahan'ny tsy fanarahan-dalàna tamin'ny fifidianana ny tolona ataon'izy ireo hiantohana ny fifidianana malalaka sy marina.
Tsy takatr'i Martha ny antony nanemorana ny fifidianana ankapobeny ao Tanzania. Nahemotra amin'ny 14 Desambra ny fifidianana ankapobeny, izay nokasaina atao ny 30 Oktobra, taorian'ny nahafatesan'ny kandidà ho filoha lefitry ny Chadema, Jumbe Rajabu Jumbe tamin'ny 26 Oktobra. Manontany izay hitranga izy raha misy kandidà iray hafa maty. Mampahafantatra izy fa marary mafy ny kandida ho filoham-pirenena avy amin'ny antokon'ny mpiasa Tanzania.
Gaphiz, izay kinga amin'ny fitadiavana tranonkala mahaliana, mitondra ny mpamaky azy amin'ny tranonkala vaovao,Tabilao Fanamarihan'ny Governemanta Tanzaniana, izay natao mba hiantohana fa miasa amin'ny tontolo anaty mangarahara sy ny tamberina andraikitra ny governemanta.
Niteraka adihevitra lehibe i Harakati mikasika ny hoe ho ekena manerantany ihany ve ny mozikan'ny tanora any Tanzania, fantatra amin'ny anarana hoe “Bongo Flava,”. Ny anton'izany dia ny hoe raha tsy mijanona maka tahaka ireo mpanakanto Amerikana ireo tanora mpanakanto ireo, dia tsy hahomby mihitsy any ivelan'i Tanzania sy any amin'ireo firenena mpifanolo-bodirindrina. Maneho hevitra momba ny lahatsorany, mpamaky iray avy ao Finlandy manazava ny antony iheverany hoe tsy mozika diso ny “Bongo Flava”. Manoratra izy fa: Misy andry telo lehibe amin'ny mozika: ny gadona, ny feo, ary ny firindra (ary indraindray ny tononkira). Natsangana tamin'ny gadona sy ny tononkira ihany ny Bongo Flava. Ary ratsy ny famoronana ny gadona tamin'ny vatamarobokotra.
Manantena aho fa handray anjara amin'ny resaka ny sasany amin'ireo artista ao Tanzania.